ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य ! कति भयो? जान्नका लागि पुरै समाचार हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य ! कति भयो? जान्नका लागि पुरै समाचार हेर्नुहाेस्
admin January 5, 2021 January 5, 2021 समाचार	0
एजेन्सी । केहि महिना अगाडिदेखि भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि आकासिएको प्याजको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको छ । भारतले आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको भन्दै गत भदौ २९ गतेदेखि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्याज निर्यातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध भारतले पुस १७ गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षबाट हटाएको हो । प्रतिबन्ध हटाउँदा बढेको प्याजको मूल्य अहिले घट्न थालेको हो ।
यसैगरी गत कात्तिकमा एक हजार २९८ टन र मङ्सिरमा सबैभन्दा धेरै एक हजार ६९० टन प्याज भित्रिएको हो । यसैगरी पुस १ देखि १९ गतेसम्म एक हजार २५९ टन प्याज कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिएको छ । जसमा एक हजार १७७ टन प्याज भारतबाट, ३० टन प्याज चीन तथा बाँकी ५२ टन नेपाली प्याज भित्रिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिबन्धको शुरुआती दिनहरुमा केही व्यापारीले चीनबाट प्याज आयात गरेपछि पछिल्ला दिनमा भारतबाट नै आयात भइरहेको थियो । पर्याप्त मात्रामा भारतबाट प्याज आयात भएपछि पछिल्लो समय यसको मूल्य विस्तारै घट्न थालेको छ । हाल नेपालमा खपत हुने प्याज ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट आयात हुने गरेका छन् भने बाँकी चीन र नेपालमा नै उत्पादित प्याज प्रयोग हुने गरेको छ ।
२०७७ साल पौष २२ गते बुधवारको हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य !
निर्मला काण्डपछि भारत भागेका कञ्चनपुरका युवक काठमाण्डौंमा पक्राउ, घटनाले लियो नयाँ मोड
काठमाडौँमा घट्यो कसैले नसोचेको अनौठो घटना, केटाले बिहे गर्न नमाने पछी केटिले यस्तो सम्म गरिन !
भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो राम्रो कामकाे शुरूवात… सक्दो सेयर गराैं